पिसिआर पोजिटिभ आए के गर्ने ? यस्ता छन् जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेका सुझाव « Kathmandu Pati
पिसिआर पोजिटिभ आए के गर्ने ? यस्ता छन् जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेका सुझाव
काठमाण्डु – विश्वाभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संंक्रमणदर नेपालमा पनि बढिरहेको छ । सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले यसपटकको कोरोना संक्रमण गतवर्षभन्दा फरक किसिमको रहेकाले सर्तक रहन आग्रह गर्दै आएका छन् । यस्ता छन् जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले कोरोना लागेमा के गर्ने ? र यसबाट जोगिने उपायहरु :
– पिसिआर पोजिटिभ आएमा गतसाल जस्तो सप्लिमेन्ट ( भिटामिन वा इम्युन बुस्टर ) खाएर ढुक्क नहुनुहोला । यसपटक छिटो कोभिड निमोनिया हुने भएकोले तुरुन्तै नजिकको कोभिड अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा जानुहोला । त्यहाँ चिकित्सकले तपाईलाई परीक्षण गरेर आबश्यकता अनुसार छातीको एक्स रे, रगतको जांच तथा सिटि स्क्यान गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ । यदि तपाईको अवस्था खराब छ भने उहाँहरुले औषधि वा भर्नाको लागि सल्लाह दिनुहुनेछ । उहाँहरुको सल्लाह अक्षरस पालना गर्नुहोला ।
– अस्पताल जाने बेलासम्म घोप्टो परेर सुत्नु भयो भने अक्सिजनको स्तर केहि बढ्दछ ्र तसर्थ पेटको बलमा घोप्टो परेर सुत्नुहोला ।
– प्रतिरोध क्षमता बढाउनको लागि जथाभावी आयुर्बेद औषधि नखानुहोला । सम्बन्धित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सिफारस अनुसार मात्र आयुर्बेद औषधि सेवन गर्नुहोला । आयुर्बेद औषधिले कोभिड निको हुँदैन । तपाईको स्टामिना बढाउँछ । यस्तो बेला सबै चिकित्सा पद्दतिको एकीकृत उपचार प्रभावकारी हुन्छ ।